Kindle Oasis VS Kindle Voyage, ireo eReaders roa tsara indrindra eny an-tsena mifanatrika | Ireo mpamaky rehetra
Villamandos | | Amazon Kindle, mpamaky
Omaly ihany dia nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny vaovao i Amazon E-mpamaky Kindle Oasis miaraka amin'ny ...Kindle Oasis»/], eReader avo lenta vaovao izay misongadina amin'ny endriny nohatsaraina, momba ny teo alohany, ny Mpamaky e-mpamaky Kindle Voyage, ...Voyage Kindle»/] Ary ny fitahirizana tsy tapaka ireo fiasa natolotry ny Kindle teo aloha, izay ny sainan'ny orinasa notarihin'i Jeff Bezos. Taorian'ny famakafakana azy omaly, rehefa afaka nanandrana izany nandritra ny minitra vitsy tamin'ny hetsika izay nanasan'ny Amazon Spain antsika, androany dia tsy azontsika atao ny tsy mahita ny fotoana hifanatrehana izany amin'ilay teo alohany ary koa hampitahantsika azy Kindle Paperwhite -...Kindle Paperwhite »/], izay azontsika lazaina fa zandriny lahy.
Androany sy amin'ny alàlan'ity lahatsoratra ity Hitahantsika amin'ny antsipiriany amin'ny antsipiriany momba ny Kindle Oasis vaovao amin'ny Kindle Voyage, tsy manadino araka ny efa nolazainay momba ny Kindle Paperwhite. Angamba tsy dia be loatra ny fahasamihafana, saingy zava-dehibe izy ireo ary na dia eo aza ny fahitana azy ireo dia toa fitaovana telo mitovy izy ireo any aoriana dia tsy mitovy izy ireo, manomboka amin'ny endriny ary miafara amin'ny vidiny.
Raha te hahafantatra ianao hoe mitovy ny Kindle Oasis vaovao, ny Kindle Voyage ary ny Kindle Paperwhite, tohizo hatrany ny famakiana satria amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitanao, tsy izany ihany, fa zavatra maro hafa, izay mino izahay fa tena mahaliana anao raha mieritreritra ianao ohatra ny mividy eReader vaovao, hiditra amin'ny tontolon'ny famakiana nomerika na hanovana ny fitaovana anananao ankehitriny.
Alohan'ny hampitahantsika ny efijery, ny vidiny na ny tombony azo amin'ny lafiny samihafa, dia hanao fanadihadihana feno momba ny mampiavaka azy manokana sy ny masontsivana izy mba hahafahantsika rehetra hahita ny tenantsika ary hahafantatra tsara izay omen'ny tsirairay amin'ireo Kindle ireo ho antsika.
1 Endri-javatra sy famaritana ny Kindle Voyage
2 Endri-javatra sy famaritana ny Oasis Kindle
3 Endri-javatra sy famaritana Kindle Paperwhite
4 Volavola; dingana iray miverina hanatsara hatrany
5 Efijery; aza mitady azy ireo fa tsy misy mahasamihafa azy
6 Ny tranga Kindle Oasis vaovao, ilaina ary ampy amin'ny maha-zava-baovao?
7 Ny vidiny; fahasamihafana lehibe
8 The Kidle Oasis, mpandresy amin'ity duel ity nefa tsy misy ady hevitra be loatra
Endri-javatra sy famaritana ny Kindle Voyage
Screen: mampiditra efijery 6-inch miaraka amin'ny haitao e-papper litera, mikasika, miaraka amin'ny vahaolana 1440 x 1080 sy 300 teboka isaky ny iray inch
Refy: 162 x 115 x 76 mm
Vita amin'ny manezioma mainty
Lanjany: kinova WiFi 180 grama ary 188 grama ny kinova WiFi + 3G
Fahatsiarovana ao anaty: 4 GB izay ahafahanao mitahiry eBook mihoatra ny 2.000, na dia miankina amin'ny haben'ny boky tsirairay aza izany.
Fifandraisana: WiFi sy fifandraisana 3G na WiFi ihany
Format apetraka: Format Kindle 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI tsy voaro ary PRC amin'ny endriny voalohany; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP amin'ny fiovam-po
Fifanohitra an-tsary avo kokoa izay ahafahantsika mamaky amin'ny fomba milamina sy mahafinaritra kokoa
Mpamaky e-mpamaky Kindle Voyage, ...
Fampisehoana an-tsary 300 dpi mahavariana mahavariana - mamaky toy ny taratasy, tsy misy famirapiratana, na dia amin'ny tara-pahazavana mamirapiratra aza.
Jiro fanaraha-maso mifehy tena izay manome ny haavon'ny famirapiratry ny andro sy ny alina; vakio tsara mandritra ny ora maro.
Ny fampiasa amin'ny pejy fihodinana dia mamela anao hanova pejy nefa tsy hanainga ny rantsan-tananao.
Vakio araka izay tianao. Amin'ny vidiny iray dia maharitra herinandro ny bateria fa tsy ora maro.
Katalaogy be dia be an'ny eBooks amin'ny vidiny ambany: eBay mihoatra ny 100 amin'ny Espaniôla miaraka amin'ny vidiny latsaky ny 000 €.
Endri-javatra sy famaritana ny Oasis Kindle
Asehoy: mampiditra efijery 6-inch amin'ny teknolojia Paperwhite miaraka amin'ny E Ink Carta ™ sy fahazavana mamaky, 300 dpi, haitao fanaovana font namboarina ary 16 mizana volondavenona
Refy: 143 x 122 x 3.4-8.5 mm
Namboarina tamina trano plastika, miaraka amina endriny polimerika izay nisedra fizotra galvanizing
Milanja: kinova WiFi 131/128 grama ary 1133/240 grama ny kinova WiFi + 3G (Aseho aloha ny lanjany nefa tsy misy fonony ary faharoa miaraka aminy)
Format miampy: Format 8 Kindle (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI tsy voaaro, PRC amin'ny taniny; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP amin'ny fiovam-po
E-mpamaky Kindle Oasis miaraka amin'ny ...
Ny Kindle farany ambany indrindra sy maivana indrindra aminay; vakio tsara mandritra ny ora maro.
Famolavolana bokotra ergonomika raha hiova pejy tsy misy ezaka.
Ilay Kindle manana fahaleovan-tena lehibe kokoa. Ny tranga hoditra misy bateria mitambatra dia afaka manitatra ny androm-piainan'ny fitaovana mandritra ny volana maromaro.
Safidio ny lokon'ny fonony azo esorina: mainty, burgundy na walnut.
300 dpi fampisehoana avo lenta - mamaky toy ny taratasy vita pirinty.
Endri-javatra sy famaritana Kindle Paperwhite
Asehoy: mampiditra efijery 6-inch miaraka amin'ny haitao taratasy e-taratasy sy hazavana famakiana mifangaro, 300 dpi, haitao fanaovana font namboarina ary 16 mizana volondavenona
Refy: 169 x 117 x 9.1 mm
Lanjany: kinova WiFi 205 grama ary 217 grama ny kinova WiFi + 3G
Battery: Amazon dia miantoka fa amin'ny fiampangana tokana ny fitaovana ahafahantsika mankafy mamaky mandritra ny 6 herinandro.
Fahazavana mifono namboarina manokana: mamaky andro sy alina.
Ankafizo ny fitiavanao mamaky tsy misy fanairana mailaka na fampandrenesana.
Volavola; dingana iray miverina hanatsara hatrany
Tamin'ny fahatongavana teny an-tsena tamin'ny taon-dasa tamin'ny Kindle Voyage, Amazon dia te-hanolotra fitaovana iray manana hery lehibe, famaritana mahaliana, fa ambonin'izany rehetra izany dia misy endrika Premium sy kanto. Vita amin'ny fitaovana avo lenta, amin'ny fitazonana azy eny an-tananao fotsiny ianao dia afaka mahatsapa fa tsy teo alohan'ny fitaovana rehetra ianao.
na izany aza Tamin'ny fahatongavan'i Kindle Oasis teny an-tsena dia toa nanapa-kevitra ny hiala kely ny orinasa notarihin'i Jeff Bezos, mba handehanana amin'ny lalana hafa., izay miharihary fa mahaliana kokoa. Amin'ity Kindle vaovao ity dia ny plastika avo lenta no mpilalao fototra indray, afaka manome antsika fitaovana misy refy kely kokoa ary ambonin'izany rehetra miaraka amin'ny lanjany ambany kokoa.
Ho fanampin'izay, ny plastika amboarina amin'ity Kindle vaovao ity dia tsy nanome antsika fahatsapana ratsy ary ny fihenan'ny lanja dia ankasitrahana indrindra. Araka ny efa hitanao dia niala tamin'ny 188 grama izahay fa milanja 131 grama fotsiny ny Kindle Voyage izay milanja ny New Kindle Oasis.
Ny fampidirana ny tranga, miaraka amina batterie anatiny, dia iray amin'ireo tanjaky ny Kindle Oasis, izay tsy nampiasaina ireo fitaovana avo lenta izay nampiasaina tamin'ny Kindle Voyage, fa nosoloina hanolotra antsika zavatra maro hafa, izay mahaliana kokoa, na farafaharatsiny no eritreretintsika.
Raha ny momba ny famolavolana dia afaka milaza izany isika ny Kindle Paperwhite dia mihemotra iray ambadiky ny Kindle Oasis sy ny Kindle Voyage, na dia sambatra aza ny ankamaroan'ny mpamaky dia tsy miraharaha ny famolavolana ivelany ny fitaovana ary ny tena zava-dehibe dia ireo toetra atolotray azy ireo anatiny.
Efijery; aza mitady azy ireo fa tsy misy mahasamihafa azy
Raha hametraka eo ambony latabatra ireo Kindle telo isika ary hampodina azy ireo, dia afaka mahita fitoviana maro sy fahasamihafana vitsivitsy eo amin'ny efijery izy.. Ary ny efijery misy ny Kindle Oasis, ny Kindle Voyage ary ny Kindle Paperwhite dia mitovy habe, mampiasa ny haitao mitovy ary koa manana ny fatran'ny piksel isaky ny santimetatra.
Ny iray amin'ireo fahasamihafana vitsivitsy izay ho hitantsika dia ny famirapiratany ary ny Kindle Oasis dia tonga teny an-tsena nirehareha hanome antsika hazavana lehibe kokoa, na dia amin'ny toe-javatra maivana aza. Io lafiny mampiavaka azy io dia tena tsy maha-zava-dehibe ny fahafantarana fa ireo fitaovana telo ireo dia nampiditra hazavana ahafahantsika mamaky teny, tsy misy olana ary tsy mamela ny masontsika hanandrana, ao anatin'ny haizina tanteraka.
Tsy isalasalana fa ny efijery dia tsy ho iray amin'ireo fahasamihafana izay mahatonga antsika hirona amin'ny fividianana fitaovana iray na hafa ary izany dia mitovy avokoa ny telo ary samy hafa amin'ny antsipiriany kely tsy misy lanjany loatra.
Ny tranga Kindle Oasis vaovao, ilaina ary ampy amin'ny maha-zava-baovao?
Nandritra ny andro maromaro dia siosion-dresaka no nahafantarana fa mety izany ny Kindle vaovao dia hampiditra tranga iray izay misy batterie ivelany no mpandray anjara fototra. Ity tranga ity dia azontsika lazaina fa iray amin'ny fahasamihafana lehibe amin'ny Kindle Oasis vaovao momba ny Kindloe Voyage ary amin'ny ankapobeny momba izay eReader misy ny tombo-kase Amazon.
Miankina amin'ny filan'ny mpampiasa tsirairay dia mety ho fitahiana tena izy io, na dia matahotra mafy aza aho fa vitsy ny mpampiasa no manararaotra azy ary izany ny bateria eReader dia efa manolotra fahaleovan-tena lehibe ho antsika ary mino aho fa tsy ilaina izany. Kindle vaovao, ary tsy ampy ho fanavakavahana lehibe momba ilay teo alohany.
Ho fanampin'izany, tsy tokony hohadinointsika fa ity Kindle vaovao ity dia manome antsika famandrihana haingana, izay mamela ny batterin'ny fitaovana ho voampanga ao anatin'ny fotoana fohy. Tena misy dikany ve ny eReader amin'ny tranga misy bateria anatiny?.
Ny vidiny; fahasamihafana lehibe
El Voyage Kindle Tonga teny an-tsena izy io tamin'ny vidiny nahagaga mihoatra ny iray, satria ny ankamaroantsika dia manana eReaders ho fitaovana manana vidiny mahazatra na kely kokoa ary azon'ny mpampiasa rehetra atao. Nanamarina izany i Amazon tamin'ny filazany fa miatrika boky elektronika avo lenta isika, vita amin'ny akora Premium ary nanolotra fiasa sy fampiasa tsy azonay amin'ny fitaovana hafa amin'ity karazana ity. Amin'izao fotoana izao Ity fitaovana ity dia azo vidiana amin'ny vidiny 189.99 euro.
Ny orinasa notarihin'i Jeff Bezos dia nanohy nitazona tamin'ny katalaoginy na ny Kindle Basic na ny Kindle Paperwhite, izay azo vidiana amin'ny 79.99 euro sy 129.99 euro.
Ny fanombohana ny Kindle Voyage dia tsy nandeha ratsy ho an'ny magazay lehibe an-tserasera ary na dia teo aza ny olana teo amin'ny tahiry voalohany, dia nivadika ho isan'ny be ny varotra. ny Kindle Oasis Midika izany fa tokony handeha lavitra kokoa ary izany dia mbola ambony noho ny an'ny Kindle Voyage ny vidiny, raha tsy misy, araka ny hitantsika, dia manome zava-baovao be loatra ho antsika. Ity fitaovana ity amin'izao fotoana izao azo vidiana eny an-tsena amin'ny vidiny 289.99 euro, vidiny tena mandrara ho an'ireo mpampiasa marobe izay tsy mihevitra akory ny fahafahan'ny fandaniana vola amin'ny boky elektronika, izay azon'izy ireo ampiasaina mba hankafizany fotsiny ny famakiana nomerika.
Ny fahasamihafana eo amin'ny vidin'ireto fitaovana telo ireto dia tena manandanja ary ankehitriny dia sarotra ny mahita mpampiasa be loatra izay vonona hampiasa vola 300 euro amin'ny eReader iray. Mazava ho azy, raha manao izany isika dia hanana Kindle miaraka amina famolavolana premium ary misy endri-javatra mahavariana sy famaritana.
Raha mirona handany vola kely kokoa isika, amin'ny vola 129.99 euro izay mendrika ny Kindle Paperwhite dia hanana Kindle tena tsara isika izay hahafahantsika mankafy ny famakiana nomerika, izay rahateo no tanjona amin'ny fividianana eReader. Azontsika atao ny milaza fa ny endrika dia faharoa.
Ny fahasamihafana amin'ny vidiny dia avo; Moa ve be loatra amin'ny lafiny famolavolana sy ny fahombiazana ka mila mandoa izany fahasamihafana izany?.
The Kidle Oasis, mpandresy amin'ity duel ity nefa tsy misy ady hevitra be loatra
Marina fa nahavita nanao ny Kindle Oasis i Amazon izay manana lanjany ambany kokoa sy famolavolana faran'izay tsara, miaraka amina tranga vaovao izay manome bateria fatra fanampiny, nefa eo no ahafahantsika milaza fa tonga ny vaovao. Raha ny Kindle Voyage dia andiany 1.0 an'ny fitaovana iray, ity Kindle Oasis ity dia heveriko fa mety 1.2 tsy misy olana, rehefa nanantena isika fa ho 2.0 misy vaovao manandanja ity.
Ilay Kindle Oasis vaovao no mpandresy amin'ity duel ity hatramin'ny telo, na dia tsy misy ady hevitra be loatra aza ary miaraka amin'ny vidiny izay nitombo tsy nisy zavatra hafa ary tsy latsaky ny 100 euro raha oharina amin'ny Kindle Voyage. Samy nanantena zavatra betsaka kokoa isika avy amin'ilay Kindle vaovao ary hampiditra fampiasa vaovao izy io fa tsy tranga misy batterie ao anatiny fotsiny. Ity tranga ity dia mety ho tena ilaina amin'ny finday avo lenta izay fohy ny androm-piainany, saingy amin'ny eReader izay mety maharitra herinandro maromaro ny bateria dia tsy hitako ny lojika na ny mahasoa.
Amin'ny duel henjana dia ny mpandresy dia ny Kindle Oasis araka ny efa nolazainay, fa raha mijery ny vidiny isika ary mijery indrindra izay tadiavintsika ao amin'ny eReader, angamba ny mpandresy indray dia ny Kindle Paperwhite, ny Kindle voalanjalanja indrindra amin'ny tantara miaraka amin'ny vidiny mahavariana tsotra izao.
Iza no mpandresy amin'ny duel eo amin'ny Kindle Oasis vaovao, ny Kindle Voyage ary ny Kindle Paperwhite ho anao?. Azonao atao ny milaza aminay ny hevitrao amin'ny habakabaka voatokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity, amin'ny forum na amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy izay misy anay ary vonona hiresaka momba an'io na lohahevitra hafa miaraka aminao izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » Hardware » mpamaky » Kindle Oasis VS Kindle Voyage, ireo eReaders roa tsara indrindra eny an-tsena mifanatrika
Diso fanantenana aho, niandry ny farany ho adika amin'ny fanovana estetika tsotra, raha ny fahitako azy dia tsy dia manintona toy ny dia.
toa adala amiko ny vidiny.
tsy misy processeur vaovao, tsy misy écran nohavaozina, tsy misy loko miloko sns.
Mbola eo anelanelan'ny vanim-potoanan'ny mpamaky boky isika, misy orinasa sahy mandray ny diany mankany amin'ny Renaissance sy Modernity?
Aiza no miafina ilay mpikirakira imx7 malaza, izay misy ny efijery misy loko, na dia novonoina aza izy ireo, izay iampangan'ny herin'ny masoandro, ...
ny fiakarana kalitao dia tsy maintsy avy amina orinasa hafa fa tsy avy amin'ny amazona
lambo dia hoy izy:
Te hanandrana ny Oasis aho. Azoko antoka fa tena ahazoana aina ny mihazona tanana iray. Amin'izay lafiny izay dia miarahaba an'i Amazon aho amin'ny famolavolana ny fitaovana. Manana fisalasalana aho amin'ny amin'ny maha-mahafinaritra azy ny manindry ny bokotra ara-batana, azo antoka fa mora izany nefa manontany tena foana aho hoe maninona no tsy nisy naka tahaka ilay kodiarana kely nananan'i Papyre 5.1 taloha. Mbola tsy nahita zavatra nahafinaritra kokoa hitodihana tamin'ny tanana iray aho.
Ny vidiny no nahatezitra ahy. Tena lafo izany. Heveriko fa ny zava-misy mampiditra ny fonony dia misy ifandraisany (betsaka). Ny fanontaniana dia hoe, maninona no ampidirin'izy ireo izany, ka mampiakatra ny vidin'ilay fitaovana, fa tsy manolotra azy misaraka ho famenony? Matetika tsy mampiasa tranga aho satria ataon'izy ireo ratsy tarehy ny fitaovana (tsy amin'ity tranga ity, izay somary kanto) ary ampitomboin'izy ireo ny lanjany ka tsy azoko eto hoe maninona i Amazon no nanapa-kevitra ny hampiditra azy. Hisy ny antony.
Tena tsara tokoa raha manome fahaleovan-tena bebe kokoa ny fonony saingy heveriko fa ny fandrosoana tonga lafatra dia hitranga amin'ny andro fampidiran'izy ireo ny tontolon'ny masoandro mandrehitra azy ireo ary hahatonga azy ireo tsy hiankina amin'ny fandehanan'ny herinaratra. Miaraka amin'izay kely lanin'ny mpamaky heveriko fa zavatra azo atao izany. Heveriko fa raha tsy nataon'izy ireo izany dia vokatry ny famolavolana na ny lanjany na ny olana amin'ny fandaniam-bola. Tsy haiko.
Araka ny nolazainao tao amin'ny lahatsoratra, ny tsy fitovizany dia: maivana kokoa amin'ny fitaovana mihitsy, fizakantena bebe kokoa (miaraka amin'ny fonony), misy fonony, endrika tsara kokoa ary jiro tsara kokoa. Ampy ve ny fanamarinana ny mahasamihafa ny vidiny? izany no fanontaniana.
Amin'izao fotoana izao dia mbola miaraka amin'ny KP2 "taloha" aho.
Mamaly an'i jabaal
zencruzer dia hoy izy:
Ny olan'ny Kindle Oasis miaraka amin'ny tranga dia toa tsy misy baterian'ny tranga ny auntonomy of the Kindle dia tsy mihoatra ny roa herinandro. Ary izany dia satria i Amazon niantehitra tamin'ny zava-misy fa ny ankamaroan'ny tompon'ny iray amin'ireo e-Readers dia mitondra azy io hatrany amin'ny tranga iray.
Mamaly an'i zencruzer
Eo anelanelan'izy roa ireo ihany ny dia, satria tsy hitako izay tena fanatsarana ny oasis. Fa raha mila misafidy mpandresy aho, kobo h2o dia mandresy mazava tsara amin'ny fihotsahan'ny tany ho mpamaky manana ny fahombiazany tsara indrindra eny an-tsena sy ny firmware famakiana sy fikirakirana tsara indrindra. Na dia kely aza ny dpi ananany. Raha resaka DPis ary mijanona amin'ny 6 "dia ny mpandresy mazava no kobo hd tsy misy resaka momba ny kalitaon'ny vidiny.
photius dia hoy izy:
Manana Kindle faha-7 sy Kobo Glo HD aho ary azafady milaza fa somary tsy nisy vokany ny Glo raha oharina amin'ny Kindle PaperWhite izay misy 300 dpi koa.
Mamaly an'i Photius
Vidiny lafo nefa tsy manome fanavaozana miavaka. Izy io dia "mitovy kokoa" fa lafo kokoa. Fahadisoam-panantenana tanteraka. Ny fandrosoana dia tsy maintsy mifanome tanana amin'ny kalitaon'ny efijery. Ny zava-misy fa ny olan'ny fiaviany fotsy tanteraka sy ny tarehintsoratra mainty mifanohitra tanteraka dia tsy voavaha mazava dia manondro fa tsy misy fanapahan-kevitra hentitra amin'ny fanavaozana. Araka ny nolazain'ny olona iray; Mbola eo anelanelan'ny vanim-potoana afovoan'ny eredaders isika.
Manaiky tanteraka anao. Efa nolazaiko foana fa tokony hiasa amin'izany i Eink, ny mifanohitra amin'izany. Fototra fotsy kokoa (ankehitriny nohaingoin'ny jiro miharo) sy ny litera mainty. Heveriko fa hanolotra teknolojia vaovao izy ireo amin'ny volana ... ho hitany izay vaovao avoakany.
Richarr dia hoy izy:
Ny mandresy dia tsy ny dia na ny oasis. Io ilay fotsy taratasy.
Tsy tiako koa ilay fonony. Amidin'izy ireo maina izany ary miresaka izahay. Saingy, tsy hitako ny fanatsarana ny taratasy-fotsy.
Valiny tamin'i Richarr
Enric Renart dia hoy izy:
Tsy izy roa ireo no "mpamaky tsara indrindra." Raha misy izany, izy ireo no Kindle tsara indrindra, ny "tampon'ilay faritra", fa ho an'ny fampiasana manokana an'i Amazon. Eny, fantatro, manao kalibration sy miova fo aho ... fa ... ahoana ny momba ny Drm? Tsy azoko ekena ho safidy mety "amin'ny alàlan'ny default" zavatra izay tsy ara-dalàna teorika. Ny fitsipahana ny Drm dia tsy tokony, priori, ho safidy. Isaky ny afaka manao izany aho dia mividy tsy misy Drm, raha mila Kindle aho dia handeha miloko taratasy na koa ilay tena tsotra tsy misy jiro, satria ireo kilalao roa ireo dia lafo be noho ny tanjona kendreny: mamaky (izay atao mahagaga ny fototra na ny misy Bq Cervantes amin'ny vidiny antonony kokoa).
Mamaly an'i Enric Renart
Jerry fahirano dia hoy izy:
Misaotra anao tamin'ny lahatsoratranao, nanampy betsaka ahy tamin'ny safidy io
Mividy ny Voyage 'taloha' amin'ny 2017?
Rehefa nanapa-kevitra ny hividy Kindle vaovao aho, dia nahataitra ahy ny Voyage tamin'ny fijeriny minimalist sy ny fijerena rehetra momba ny Oasis.
Milaza aho fa lafiny MINIMALIST ary tsy ny Oasis no tiako holazaina, raha ny fahitana endrika sy fahadiovana ny Voyage dia minimalism amin'ny mpamaky e.
Ankehitriny, tsy izany ihany. raha ny fahitana ny teknolojia dia ambony noho ny rehetra izy, manana teknolojia betsaka noho ny olona rehetra izy. Ny bokotra vovoka dia lany andro. Ny lasa no lasa. Raha mikasika ny fampiasana azy ireo dia izy ireo dia mila mianatra diplaoma fotsiny ianao ary mitazona ny rantsan-tànanao ary manindry hamadika ilay pejy, miaraka amin'ny valinteny mihetsika toy ny Apple Watch.
MANAO NY FONDRANA IZAO ary tsy miavaka !!!
Io no volavola izay hataon'i Jonathan Ive. Bokotra tsy hita.
Ary ny fitaovana !!!
Kitapo volafotsy sy karbaona, vatana maneziôma vs plastika nohosorana.
Okay, amin'ny lanjany. Amin'ny fonony dia mavesatra kokoa. Ary ny Origami, izay ho tsy fahita firy, nefa miasa ary manome sentra Japoney iray manontolo.
Ny ergonomics amin'ny teôria tsara indrindra amin'ny oasis dia miankina amin'ny tananao, ny Oasis dia mety ho lasa kely loatra na dia misy aza ny vahaolana azo ahodina dia voavaha izany, nefa manery anao hamaky amin'ny tanana iray fotsiny.
Na izany na tsy izany dia io no sarany tsara indrindra mifandraika amin'ny Voyage mahitsizoro.
Raha hamily azy tsara dia holazaiko fa ny Voyage dia ampiasaina manerana ny solaitrabe ary ny Oasis dia mety hihoatra izany amin'ny famakiana fotoana hatoriana.
Misy ny vahaolana, mividiana ny SUV Voyage, ary ny Oasis hamaky eo am-pandriana (sangisangy fotsiny).
Io ve ny Kindle tsara indrindra?
Ny Kindle tsara indrindra dia ny dia Voyage - miaraka amin'ny bokotra tsy hita maso - sy ny habeny ary ny refin'ny Oasis.
Ny zorony boribory dia tsy mametraka anao ambonin'ny Voyage, fa estetika futuristic ary fitsangatsanganana taloha.
Ary zavatra iray hafa ... ny jiro mandeha ho azy dia fahafinaretana izay tokony ho eo amin'ny fitaovana amin'ny ho avy.
Ny LED 10 vs ny 6 an'ny Voyage dia tsy misy mahasamihafa azy, zero ny fitarainana momba ny jiro ary koa ny taratasy fotsy mamirapiratra.
PRICE, Voyage miaraka amin'i Origami dia - 50 € fotsiny - mora kokoa. Ka tsy olana io.
Oasis misy teknolojia Voyage no kely sisa azo hatsaraina.
Izany rehetra izany dia avy tamin'ny fanajana 😉
Valiny tamin'i Jerry Siegel
Misaotra anao tamin'ny lahatsoratranao, nanampy betsaka ahy tamin'ny safidy io.
Miankina amin'ny tananao io, mety ho kely loatra aza ny Oasis na dia misy vahaolana azo ahodina aza voavaha io, nefa manery anao hamaky tanana iray hatrany.
Misy ny vahaolana, mividiana ny SUV Voyage, ary ny Oasis hamaky eo am-pandriana.
Mila mividy iray ho fitsingerenan'ny andro nahaterahana amin'ny mpamaky taratasy ratsy indrindra aho, inona no hatolonao anao? Tsy maintsy mijery tsara aho